Kindle necala lokunyamalala kuka-1984 | Izincwadi Zamanje
Ngomfundi we-e-book Uhlobo Okuthile okufana nokwenzekile ngama-iPod kungenzeka: ngaphandle kokuba umkhiqizo omuhle kakhulu wezimpawu zawo emakethe, futhi kwesinye isikhathi ubeke umsebenzisi emikhawulweni engenangqondo, Kungenzeka ngigcine ngiwine ngodaka lomhlabathi. Kungenxa yesithombe somkhiqizo esiqaphile noma ngenxa yeqiniso elilula lokuthi ngenxa yokuthandwa kwalo kugcina sekubukeka njengokuwukuphela kwenketho. Eqinisweni, umuntu angaze acabange ukuthi lokhu sekuvele kwenzekile, okungenani e-United States of America.
Isithombe se- UDavid sifry.
Kodwa-ke, kunezizathu eziqinile zokucabanga ngalokho mhlawumbe Kindle akuyona imodeli ye-e-book okufanele ibe yi-hegemonic. Imigqa elandelayo ihloselwe ukukhomba ezinye zezizathu.
Iphuzu elibuthakathaka lika Kindle yilokho isebenzisa ifomethi yefayela ukulondoloza umbhalo wezincwadi ezibiziwe I-AZW ukuthi akekho owaziyo ukuthi isebenza kanjani, yi-Amazon kuphela. Okuphathelene ngempela. Hhayi nje ngoba kuhambisana eduze nalokho okuye kwabizwa ukuphathwa kwamalungelo edijithali, leyo miyalo yekhompyutha lapho umshicileli wencwadi anganquma ukuthi ayikuvumeli ukuthi wenze izinto ongazenza ngebhuku lephepha. Akuyona inkinga kuphela leyo. Inkinga ebalulekile ukuthi i-Amazon ingenza lokho ekufunayo ngale fomethi. Ungakhipha uhlelo olusha kule fomethi ukuze abafundi abasha bawaqonde ngendlela ehlukile ama-AZW, ngakho-ke okokuqala udinga ukuthenga umfundi omusha ukuze afunde izihloko ezintsha, okwesibili kungahle kufike isikhathi lapho umfundi wakho engakwazi ukuqonda izincwadi zokuqala ze-AZW okuthengile, ngakho-ke ngeke uphinde ukwazi ukufinyelela kokuqukethwe kwakho.
Kunendlela yokuxazulula lokhu, futhi kulula: i-Amazon ishicilele ukuthi i-AZW isebenza kanjani ukuze kuthi, ngesikhathi esithile ngokuzayo, abakwa-Kindle bayeke ukwazi ukuthi babuka kanjani uhlobo lokuqala lwamafayela we-AZW, umuntu ofuna finyelela kokuqukethwe kwayo, esimweni esibi kakhulu, ungahlala ubuza umqambi wohlelo lwekhompyutha ukuthola izixazululo zenkinga, ngokusekelwe olwazini olushicilelwe yi-Amazon Kodwa-ke, i-Amazon ayenzanga into enjalo, futhi ayihleleli ukwenza kanjalo: Uma uchazela umhlaba ukuthi izinqolobane zakho zisebenza kanjani, umhlaba uzokwazi ukuthi ukuphathwa kwamalungelo edijithali kusebenza kanjani futhi noma ngubani angadlula imikhawulo ebeka kubafundi. Le mikhawulo ingasho ukuthi (ngokujwayelekile, hhayi i-Kindle ngqo) ukuvimbela umsebenzisi ukuthi angakopisheli incwadi kumngane, ayiprinte, ayiguqulele kwenye ifomethi ukuze ifundwe (nganoma yisiphi isizathu) kudivayisi ehlukile. njalo njalo. Ngisho nokuvimbela ngokuphelele ukufinyelela kombhalo uma ngabe sekuvele kuyisonto, amasonto amabili noma inyanga selokhu lavulwa okokuqala, phakathi kwezinye izinto.
Ngalo mqondo, umqambi wohlelo URichard Stallman, umqalisi we software free, wabhala ngo-1996 kafushane umabhebhana, Ilungelo lokufunda, lapho abanye abafundi bezithola besenkingeni yokuziphatha: kumele banqume ukuthi bayabasiza yini ofunda nabo ngokubanika ukufinyelela kulwazi oluwusizo ezifundweni zabo (ngengozi yokujeziswa ngokwephula imithetho ye-copyright) noma bakhethe ukuthobela umthetho ominca. Esinye sezigaba sifundeka kanjena:
Kwakunezindlela ezizungeze izilawuli ze-SPA [Software Protection Authority] kanye nehhovisi eliphakathi lamalayisense, kepha futhi zazingekho emthethweni. UDan wayenomuntu afunda naye ekilasini lakhe lokufunda, uFrank Martucci, owathola i-debugger engekho emthethweni, futhi wayisebenzisa ukweqa ukulawula i-copyright yezincwadi. Kodwa watshela abangane abaningi kakhulu, futhi omunye wabo wabika ku-SPA ukuze athole umvuzo (kwakulula ukulinga, ukukhaphela abangane bakhe, abafundi abanezikweletu ezinkulu). Ngo-2047 uFrank wayesejele; kepha hhayi ngokugenca, kepha ngokuba ne-debugger.
Lawa magama angazwakala enehaba futhi ngokuqinisekile ayingxenye yendaba eqanjiwe. Kepha kusuka endabeni yokuthi, Ngokwehaba, kuhlose ukwenza umfundi abone ubungozi bamamodeli njengoba buvalwe njengoMusa. Futhi empeleni, iqiniso alikude kakhulu nalokho okutshelwa ngaphakathi Ilungelo lokufunda.
Lokhu okulandelayo kwenzeke ngesonto eledlule. Kukhathalogi yezincwadi ze-elekthronikhi iAmazon ezenze zatholakala kubasebenzisi bohlobo lwazo bekukhona, phakathi kwabanye abaningi, 1984 y Ukuhlubuka epulazini nguGeorge Orwell. Ngesinye isikhathi, inkampani yabona ukuthi empeleni ayinamalungelo adingekayo okuyithengisa, ngakho yabasusa ohlwini lwezincwadi ezazikhona. Ngawo lowo mzuzu, abantu ababethenge lezo zincwadi babone ukuthi ziphinde zanyamalala kanjani nakuma Kindle abo.
Kungenzeka kanjani? Isizathu silula, okungenani ngokubuka komthetho. Intatheli uJuan Varela uyichaza kanjena: «Izincwadi ezidijithali akuzona ezakho. Ucabanga ukuthi ngezakho, ukuthi ungumnikazi wazo ngokufunda kwazo kanye ne-PVP. Akunjalo. Abashicileli nezitolo ezidayisa izincwadi ezidijithali empeleni bayaziqasha. "
Futhi leyo inkinga yesibili enkulu ngemodeli yohlobo, okuyi izincwadi, uma sezithengiwe, akuzona ezomthengi, kodwa zinelayisense ngabashicileli futhi, vele, basungula imigomo ngendlela ababona ifanele ngayo, bagcine amalungelo abonakala efanelekile futhi anikeze umthengi amalungelo ambalwa kakhulu. Ukuhambisana nohlaka lokulawula olunemikhawulo eminingi kangaka, akungabazeki, uhlelo lokulawula luyadingeka, lapho i-Amazon kumele yazi ukuthi uyisebenzisa kanjani idivayisi yayo (engeyona eyakho ngokuphelele: ingaphezu kwayo yonke) futhi ikwenze usayine lokho uyavumelana nobudlova obunjalo ngokwemigomo nemibandela yesevisi.Ngendlela, uma ukhuluma ngama-dystopias: ukuthi konke lokhu kwenzeke ngencwadi efana 1984 kuseyindida ehlekisayo.
Ngokufanelekile, yiqiniso, sebenzisa ithuba le- izinzuzo zokuba nezincwadi ngefomethi ye-elektroniki ngaphandle kokuchitha imizamo, njengoba iAmazon ibisenza, ngokugqugquzela okungekuhle nokuzikhethela balimaza, ngemuva kwakho konke, bonke labo abanentshisekelo yokuthi izincwadi ziyabhalwa, zisatshalaliswe futhi zifundwe ngangokunokwenzeka.
Ikusasa lokufunda (umdlalo ngezenzo eziyisithupha)
I-Amazon isusa ngokungalindelekile izincwadi ezimbili zohlobo, zombili zika-Orwell
I-Amazon ihoxisa izincwadi ezimbili kumakhasimende ayo nge-Kindle
I-Amazon Isusa Imisebenzi Emibili ye-Orwell Emikhakheni Yamakhasimende
Ukuphathwa Kwamalungelo edijithali
Ngokubambisana singaqeda ukufaka okunamathiselwe kufomethi ye-Word.
Ama-ebook akuwona awakho
Ikusasa Lokufunda (Ukudlala Ngezenzo Eziyisithupha)
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Kindle Necala Lokunyamalala kuka-1984
I-Kindle empeleni akuyona leyo evimbela. Ifunda amanye amafomethi, njenge-MOBI futhi kunezinhlelo ezingaphezu kweyodwa eziguqula cishe noma iyiphi ifomethi ibe yi-MOBI, njengeCaliber. Ngine-Kindle 3 futhi engikushiyile ukufunda.